Misika inosimuka: ndeipi yakanakisa kudyara mu | Ehupfumi Zvemari
Kana iwe uchitsvaga imwe nzira kune equities, izvi zviri pachena kuti ndizvo zvakagadzirwa nemisika iri kubuda. Haisi iyo yakajairika kushanda mukutenga nekutengesa masheya pamusika wemasheya. Asi kana iwe ukavhura zvinzvimbo panguva chaiyo inogona kuve inobatsira zvakanyanya nekuti ine yakafara kumusoro kwaniso. Kunyangwe mune chero chiitiko usinga kanganwe kuti iwe unotora nhevedzano yengozi dzakanyanya dzinogona kuita kuti iwe usiye maeuro mazhinji munzira. Hazvishamisi kuti kana iwe usina ruzivo rwakakwana zvine njodzi chaizvo nekuti kusagadzikana kwacho kuri pachena kupfuura pamisika yemadzitateguru.
Ehe izvo investments mumisika iri kusimukira inogona kunge iri mhinduro kana iri mumisika yemasheya enyika dzakasimukira zvakanyanya iyo yepamusoro yakaneta. Mupfungwa iyi, ivo vanoita basa remusika unowirirana mausingafanire kupa mari hombe yemipiro. Kana zvisiri, pane kudaro, mari yacho ichave ishoma senzira yekukudzivirira kubva kumafambiro asingatarisirwe mumisika yemari iyi.
Asi iwe unofanirwa kuziva kuti mumisika irikubuda pane zvakawanda zvikumbiro uye hazvisi zvese zvakafanana. Nekuti vanobva kunyika dzakasiyana sevanogona kunge vari China kana India. Nemhedzisiro dzakasiyana, sezvaungaona kubva zvino zvichienda mberi. Nepo mune kumwe kumuka kuchinyatso shamisa, mune mamwe mapopoma acho anogadzirwa nehutachiona hwakakosha sezviri kuitika panguva ino chaiyo. Icho chimwe chezvikonzero nei uchifanira kuita nekuchenjerera kwakanyanya kana uchizovhura nzvimbo kubva kune ano anotevera mazuva.
1 Ari kubuda misika: China
2 Zvakanakira mari yekudyara
3 Kudiwa muIndia kunononoka
4 Misika yeLatin America inoenderera
5 Russia inogona kunge iri kushamisika
6 Zvimwe zveEuropean Stock Exchange
Ari kubuda misika: China
Kana paine parizvino musika wekutengesa wakajeka, zviri pachena kuti ndiyo inomiririrwa neChina. Icho chiri chechokwadi icho chinonyanya kukurudzira pane zvese kubvira mumwedzi yekutanga yegore rino yakaonga pamusoro pe10% chete. Inotungamira misika iri kubuda uye kusvika pakuve imwe yemikana mikuru yekutenga izvozvi. Kunyangwe kukahadzika kwakagadziridzwa nezvekuti kusvika pakadii kuita kwenyaya iri kumusoro kucharamba kuchienderera. Nekudaro, zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti kuwedzera uku kuchiri kungogara kweakasara egore. Iko, simba rekutenga rakasimba kwazvo, richitora mukana weutera hwemisika inosara yemari.
Kubva pane ino mamiriro ese, iyo China stock musika ndeimwe yemikana mikuru yebhizinesi yauinayo parizvino. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti misika yezvemari yasara haisi kuzvibata sezvinotarisirwa nevadiki vepakati nepakati. Kusvika pakuti kuyerera kune simba kwemari kuri kutsauswa yakanangana nenzvimbo iyi yakasarudzika yenzvimbo. Iwe unogona kuita mashandiro kuburikidza nekutenga uye kutengeswa kwemasheya, asi zvakare kuburikidza nezvimwe zvakachengeteka zvigadzirwa zvemari. Semuenzaniso, mari yekudyara inoenderana nemusika uyu weAsia.
Zvakanakira mari yekudyara
Kuisa mari mumisika yeChina yemari kuburikidza nemuenzaniso wekudyara uyu unosanganisira zvakateedzana zvezvakanaka zvaunofanira kuziva kubva zvino zvichienda mberi. Chimwe chezvinyanya kukosha ndechekuti iwe uri muchinzvimbo chekusiyanisa hupfumi hwako zvakanyanya. Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti mari iyi inogona kusanganiswa nezvimwe zviwanikwa zvemari. Kwete chete kubva kuequities, asiwo zveyakagadziriswa mune iyo mari yekudyara inozivikanwa semafosi akaumbwa. Uye kuti ivo vanovavarira kune yakawandisa zvine mwero kana inochengetedza investor profil iyo inoda kudzivirirwa kwakanyanya mune yakasimwa capital.
Iyi kirasi yemari yekudyara ine mukana wekuti ivo vari kuwedzera kuverenga pane inopiwa simba kubva kumakambani manejimendi anovashambadza. Kusvika padanho rekuti iwe hauzove nematambudziko akawandisa kuendesa yako yekuda nenzira. Kubva pamari ine hukasha zvakanyanya kune vamwe vano dzivirirwa uye izvi zviri mune zvirevo zvevamiriri vezvemari. Ehezve, mari idzi imotokari yekufambisa chikumbiro ichi chepakutanga zvekuti chakagadzirirwa misika yeChina. Pamusoro pezvikomborero izvo zvimwe zvigadzirwa zvemari zvinokupa izvozvi
Kudiwa muIndia kunononoka
Kana paine musika uri kubuda uyo wakamira pamusoro pevamwe mumakore achangopfuura, zviri pachena kuti misika yemusika weIndia. Nekuyemurika kunoshamisa uye izvo zvakagadzira mamirionea kune vamwe vadiki nepakati varimi. Nekudaro, maitiro aya akatsemuka mukati mehafu yekutanga yegore ra2018 uye atendeuka. Kusvika padanho rekuti yatove mundima isina kunaka kana uchiderera zvakatenderedza 5%. Chero zvazvingaitika, hazvinyatso kujeka kana kuri iko kudzikiswa kwakadzika kwazvo mumusika wemasheya uyu kana kana zvichipesana kuri nekuda kwekuchinja kwemaitiro, sekuratidzwa nenhamba huru yevaongorori vezvemari.
Iwo musika wekutengesa muIndia parizvino unopa njodzi dzakawanda uye kuti ivo havana kukodzera kutarisana navo nekuti pane mari zhinji yaunogona kusiya munzira kana iwe ukavhura nzvimbo. Chimwe chinhu chakasiyana kwazvo ndechekuti shanduko yemusika wezvemari inogona kunge iri mumakore mashoma. Asi zvirokwazvo, mamiriro epfupi-kwenguva haangave anowedzera kuodza moyo. Izvi zvinzvimbo zvinofanirwa kunge zvisipo kusvika pakupera kwegore sezvo mimwe misika yemakero iri kuwedzera kukurudzira kudyara.
Misika yeLatin America inoenderera
Nzvimbo yemisika yemasheya munzvimbo ino yenzvimbo haina kunaka kana. Chikamu nekuda kwematambudziko ehupfumi muchikamu chikuru chenyika dzavo. Semuyenzaniso, Brazil neArgentina uko indekisi dzayo dzakanyanya kudonha dzakatenderedza ne10% muhafu yekutanga yegore rino razvino. Kubva pane ino mamiriro, mimwe misika yezvemari ndiyo yaunofanirwa kunge uchive kunze kusvikira pakupera kwegore. Njodzi zvakare ine simba rakanyanya uye iwe une zvishoma zvaungawana kubva pakuvhura zvinzvimbo mune mamwe maindekisi ayo akakosha.
Kwete chete iBrazil neArgentina kwete nyika dzakanyanya kubatwa. Asi, avo vari munzvimbo ino yenharaunda vanokanganiswa uye havapfuure panguva yakanakisa. Zvinotora mwedzi yakawanda kana kunyange makore vasati vawana purofiti zvakare. Kunyange zvakadaro, ndeimwe yeinonyanya kushanduka pasi nemusiyano wakakosha kwazvo pakati pemitengo yavo yepamusoro nepashoma. Uye izvo zvinoita kuti zvive zvakaoma kwazvo kuti iwe uve neinowedzera kana zvishoma kugadzikana portfolio yekuchengetedzeka. Naizvozvo, haisi imwe yeanonyanya kukurudzirwa kubva zvino zvichienda mberi. Kupfuura kumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa.
Russia inogona kunge iri kushamisika
Chero zvazvingaitika, chimwe chezvishamiso zvinogona kuitika pakupera kwegore musika weRussia wemusika. Parizvino ine kuongororwa zvakare padyo ne4%. Izvo zvinogona kusimbiswa mumwedzi inosara pamberi pekupera kwegore. Chimwe chezvikonzero chekutsanangura chiito ichi ndechekudzokororwa kwemutengo wemafuta. Hazvishamise kuti uyu musika wakakosha wemari wakabatana zvakanyanya nechinhu ichi chisina kugadzirwa uye pamusoro pemamwe misika yemasheya. Kubva pane ino mamiriro, haisi zano rakaipa kuvhura nzvimbo dzinotya pamusika weSlavic wemusika. Hazvishamise kuti kugona kwayo kwekudzokorora ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvaunogona kuwana kubva zvino zvichienda mberi.
Ichokwadi icho inotongwa nemakambani emafuta, asiwo mamwe ane hukama negasi kana mamwe marudzi esimba. Imwe yesarudzo dzauinadzo dzinogadzirwa kuburikidza nemari yekudyara uye izvo zvinogona kuve zvinonakidza kusimudzira nhoroondo yemhedzisiro yako muaccount account. Asi kwete nenzira ine hukasha, asi zvishoma nezvishoma uye nekungwarira kudzivirira mamiriro asingadiwe nechikamu chikuru chevashambadzi vadiki nepakati. Chero zvazvingaitika, ndeimwe yesarudzo pamusika wemasheya waunofanira kuongorora kuti mari ichengetwe nenzira inobatsira.
Zvimwe zveEuropean Stock Exchange
Kune rimwe divi, kune dzimwe nyika zvakare muSlavic orbit, asi izvo zvakabatanidzwa mukati meiyo euro zone uye izvo zvinosanganisira yakawanda inodzorwa inivhesitimendi. Dzinomiririrwa nemasaga akafanana neaya Hungary nePoland izvo zvinogona kuve nemhedzisiro yakanaka kwazvo kubva zvino zvichienda mberi. Tichifunga nezvengozi shoma pane iri kubuda misika yemari uye kuti panguva ino indices yavo inochengetedza margins pamatanho avo akafanana neaya eWestern stock misika.
Nemukana wekuti ine mari yakafanana neyako, iyo euro. Nenzira iyi, haufanire kushandura mari nemari inotevera mumakomisheni epfungwa iyi. Uye zvakare, kusagadzikana kwavo kwakanyanya kudzorwa kupfuura mumisika iri kubuda nekuti inosanganisirwa munzvimbo yakajairika yeEuropean. Iwe unofanirwa kukoshesa iyi imwe nzira inopihwa nemisika yemari. Uine mukana wekuvandudza zvaunofarira kubva ikozvino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Misika inosimuka: ndeapi akanakisa kudyara mairi
Chii chinonzi vezera-kune-vezera kukweretesa mapuratifomu?